12 / 07 / 2021 12 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 206 Views စာ0မှတ်ချက် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား, 10292 အဆိုပါ Friends Apartments, 10295 Porsche 911, 21327 လက်နှိပ်စက်, 40486 Adidas မူရင်းစူပါစတား, ၇၁၇၄၁ Ninjago City ဥယျာဉ်, 76178 နေ့စဉ် Bugle, VIP အမှတ်နှစ်ချက်, Ideas, Lego, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Ideas, Lego မှ marvel, Lego Ninjago, Lego VIP, LEGO.com, Marvel, Ninjago, စျေးဝယ်, VIP, vip အချက်များ
ဒီနေ့ဟာအစဖြစ်တယ် Lego ယခုအပတ်တွင်မည်သည့်ကောက်ယူမှုကိုမဆိုအကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်စေမည့် Group ၏နောက်ဆုံးပေါ် VIP အချက်များဖြစ်ရပ် Lego သင့်ရဲ့ဆန္ဒစာရင်းတွင်သီးသန့်။
အသစ်ဖြန့်ချိပေါ်တွင်သင်၏မျက်စိရှိခဲ့ပါတယ် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား or 21327 လက်နှိပ်စက်? ဤသည်အခြေခံအားဖြင့်သူတို့အားအပေါ်ထိရောက်သောအစောပိုင်းလျှော့စျေးဖြစ်ပါတယ် လူကြီးများအတွက် Lego နှင့် Lego Ideas အနာဂတ်အစုံသို့မဟုတ်သီးသန့်ဆုများအတွက်သုံးစွဲရန်ရမှတ် ၁၀% နှင့်ညီမျှသည်။
ဒါမှမဟုတ်ငါတို့လိုမင်းရဲ့ရှိပြီးသား backlog ထက်တောင်ပိုကြီးတဲ့ဆန္ဒစာရင်းတစ်ခုရနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကတစ်နေ့မှာမင်းအတူတကွစုဝေးဖို့အချိန်ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ၂၀၂၁ သည်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှတောက်ပသောပြိုင်ဘက်များစွာကိုယူဆောင်လာနေပြီဖြစ်သည် ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ် နှင့် 10295 Porsche 911 သို့ 76178 နေ့စဉ် Bugle နှင့် 10292 အဆိုပါ Friends Apartments.
ကံကောင်းထောက်မစွာ, သင်သည်နှစ်ဆရနိုင်သည့်အစုံ၏နံပါတ်အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ချက်မရှိ, အရည်အချင်းပြည့်မှီသော themes များနှင့်အစုံ: ပရိုမိုအစုစုတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ပြီးရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်လည်းအခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည် adidas မူရင်းစူပါစတားသည် ၀ ယ်ယူမှုအားလုံးကိုပေါင် ၉၅ / ဒေါ်လာ ၈၅ / ယူရို ၉၅ (အနည်းဆုံးရှယ်ယာများဆက်လက်တည်ရှိသည်) အထက်တွင်ရှိသည်။
ကူးခေါင်း LEGO.com ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆက်ဆံဖို့၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ - ရိုးသားပါစေ၊ တနင်္လာနေ့ဘလူးအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမရှိဘူး။ (သင်၏ဘဏ်အကောင့်သို့ကြိုတင်တောင်းပန်ပါရစေ။ ) VIP နှစ်ဆကိုဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်အထိစတင်ပါမည်။
← တစ်နေ့တာ၏အုတ်ပုံ: အိပ်ရာမဝင်မီအလင်းနည်းနည်းမျှသာဖတ်ခြင်း
7 Lego Star Wars အပေါ်နှစ်ဆ VIP မှတ်ဂိုးသွင်းရန်သတ်မှတ် →